I-Basotho iye yabonakala njengengxenye yeqembu elikhulu leSutukezi, elibandakanya izigaba ezintathu ezibanzi: Basotho (eSouth Sotho), iPedi (Northern Sotho), ne-Tswana (eNtshonalanga).
I-Basotho yayivame ukuhlala kuyo yonke indawo ye-Highveld kodwa, kusukela phakathi nawo-1800s, iye yahlanganiswa kakhulu nombuso ozimele ozimele waseLesotho (ngaphambilini waseBasololand), insimu yawo namuhla i-enclave ngaphakathi kwemingcele yaseNingizimu Afrika.
Ngaphambi kokuba izithunywa zevangeli ziqalise izikole, imfundo yenzeke ngesikhathi sokuqalwa, ukubeka uphawu lokuya ekukhuleni. Izithunywa zevangeli zazingavumi ukuqala, futhi zazingavamile phakathi neminyaka yobukhosi, ngaphandle kweTlokoa ezintabeni....more
ABasotho eNingizimu Afrika
Izakhamuzi zokuqala zeLesotho lamuhla cishe zaziyiSan, eyashiya ifa elihlala njalo emidwebeni emasongweni omhume. Abantu bokuqala be-Bantu babe namaqembu amathathu e-Nguni, iPhatla, Polane, nePhuthi...more
Izinkolelo zaseBasotho nezimfundiso mayelana nokufa kanye nokulandela impilo ziye zathonywa ukushumayela ivangeli lobuKristu. Ngenxa yalokho, imfundiso ye-Basotho, izinkolelo nemikhuba eguquliwe ishintshiwe ngokuhamba kwesikhathi....more
Impilo yasemaphandleni yaBasotho
Esikhathini esidlule, impilo yaseBasotho yansuku zonke yayilandela isimiso, ngokuhlukana okunzima kwemisebenzi esekelwe yobudala nobulili....more
Impilo ejwayelekile yaBasotho
Ithonya elinamandla kunawo wonke eBasotho LaseLesotho ukubandakanyeka kwabo njengabasebenzi eNingizimu Afrika yezimayini nemikhiqizo ekhiqizayo. Lokhu kusho umthombo wabo oyinhloko wokuthola imali futhi uthinte imikhuba yabo....more
Izenzo Zamasiko zaBasotho
AmaBasotho ajabulela ingoma nomdanso, okuhambisana nemikhosi eminingi nemisebenzi yomphakathi. Ingoma iphinde isetshenziselwe ukuveza okuhlangenwe nakho kwabantu abangekho isikhathi eside njengabasebenzi abahamba emakhaya...more
Umshado Emphakathini waBasotho
Imishado ehleliwe eyayisetshenziselwa ukujwayela phakathi kwabaholi beBasotho kanye nezingane zezinduna, ukuzalwa kanye nobuhlobo bomndeni kubalulekile ukulawula ubudlelwane bezenhlalakahle nezomthetho....more
Ngesinye izinga iBasotho yaBoshoeshoe yayinobumbano bezomnotho nezombusazwe. Kodwa ukuhlukana kwemikhakha, ngokusekelwe ebuhlotsheni nasebudlelwaneni, kwabonakala esikhathini sokwakha isizwe futhi kuqhubeka nanamuhla....more